Cabitaanka: Talaabada Xigta ee Cannabisku Waa Cabitaano • Dawooyinka Inc.eu
Jimco, Luuliyo 1 | 2022
Isku day CBD si aad miisaanka u lumiso
Bogga ugu weyn cannabis Cabbitaanka: Tallaabada xigta ee Cannabis waa cabitaan
Cabbitaanka: Tallaabada xigta ee Cannabis waa cabitaan
albaabka daroogada April 15 2019
maqaal by daroogada April 15 2019
Cabbitaannada xayawaanka ayaa horeba ganacsi weyn u leh, wayna sii kordhayaan.
1 Shirkadaha sida Heineken iyo Coca Cola
2 Ka dibna waxaa jira: dhadhanka.
3 Khatar ku ah khamriga ama ma'aha?
4 Lacag badan ayaa la sameyn karaa
Marka ay dadku ka fikiraan xashiishadda, waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca badanaa waa sigaar cabbista, ka dibna ku qiiqaya ama ku cunaya "wax la cuni karo". Ilaa dhawaan, fikradda cabbitaanka xashiishadda runtii kuma jirin raadaarka dadka intooda badan.
Laakiin taasi waxay bilaabaysaa inay isbedesho. Tusaale ahaan, xagaaga xaga San Francisco, Shirkadda Cabitaanka Cabitaanka Ganacsigu waa abaabulkeeda koowaad ee Cannabis Drinks Expo si looga wada hadlo cabbitaanada canna, kuwaas oo la filayo in ay noqdaan suuqa 1,4 ee suuqa 2023, sida uu sheegay Zenith Global. Taasi waxay ka kacday $ 89 ee 2018. Tani waa kobaca macquul ah ee laga filayo sanadaha 5.
Soosaarayaal badan oo kala duwan ayaa CBD iyo THC ku dhejiyay cabitaano kala duwan, oo ay ku jiraan shaaha, soodhaha, cider, margaritas iyo khamriga, oo ah qiyaaso kala duwan oo laga soo qaaday qiyaaso yar yar oo 2,5 milligaraam oo THC ah weelkiiba ilaa qiyaasta sare ee 100 mg halkii weel.
Rebel Coast Winery ee Ameerika waxay bixisaa khamri aan khamri lahayn oo leh 5 mg ah THC galaaskiiba. MJ Wines waxay xashiish ku shubtay cabitaanada tamarta, qaxwada iyo khamriga waxayna ka shaqeyneysaa hemp IPA. Noocyada sida Recess, oo ka soo ururiyey $ 3 milyan maalgashadayaasha, waxay iibiyaan biyo dhalaalaya oo lagu daray soosaarida hemp. Kalifoorniya Dreamin 'waxay u fidisaa macaamiisha "fud fudud, xiisaha xashiishka xasilan" ee casiirka miraha lagu daray 10mg ee THC.
Hal shay oo u dhigma noocyo badan ayaa ah inay iyagu iska dhigaan qaybta caafimaadka iyo caafimaadka. Badankood waxay bartilmaameedsadaan wax soo saarkooda dadka doonaya galabnimo ama dariiq ay ku kala baxaan habeenkii.
Shirkadaha sida Heineken iyo Coca Cola
Mood33 wuxuu kuu balan qaadayaa "casharkaaga udgoon ee udgoon shaqsiyeed" dhalo kasta oo ka mid ah dhalada kaloriintiisa hooseeya, oo lagu sameeyay 10mg oo ah THC iyo geedo kala duwan, ubaxyo iyo miraha. Heineken ayaa soo saartay cabitaan hemp ah oo dhalaalaya oo loo yaqaan Lagunitas Hi-Fi Hop oo leh waa "IPA waxyi". Waxaa ka buuxa buunsho iyo THC, laakiin kuma jiraan aalkolo, kalooriyo ama karbohaydraytyo. Bishii Janaayo, shirkadda cabitaanka dabiiciga ah ee New Age Beverage ayaa soo bandhigtay Marley + CBD Mellow Mood, oo loogu talagalay inay tahay cabitaan nasasho leh 25mg oo CBD ah halkii adeeg.
Deyrtii hore, xitaa Coca-Cola waxay umuuqatay inay wadahadal kujirto si loo baaro safka cabitaannada CBD, laakiin shirkadda cabitaanka ayaa ugu dambeyntii go'aansatay inuusan horay u socon - hadda. Dhibaato weyn oo haysata noocyada waaweyn sida Cola ayaa ah in xashiishadda ay wali tahay daroogada Jadwalka 1 ee heer federaal, taasoo la micno ah in lagu kala saaray heroin, methamphetamine iyo LSD oo aysan lahayn qiime caafimaad. Magacaabistaas ayaa baajisay noocyada qaarkood. Sidoo kale waxay ku adkeyneysaa shirkadaha inay koraan, maadaama ay naxariis u leeyihiin dowlad kasta shuruucdeeda shaqsiyadeed iyo xaddidaadda THC iyo CBD. Calaamadeynta, dhalada, iyo xitaa xeerarka ku-fiirsashada way ku kala duwanaan karaan gobol ilaa gobol, taasoo adkeyneysa in la dhiso aqoonsi summad leh.
Ka dibna waxaa jira: dhadhanka.
Cabitaanada xashiishku maaha cabitaannada ugu dhadhanka fiican. Xaqiiqdii, waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa dhadhaminaya 'funky,' 'skunky,' iyo 'sida daaqa beerta.' Nasiib darrose, urka carrada ee dhirta ayaan si wanaagsan ugu ciyaarin casiirka miraha - ama dareeraha kale ee biyaha ku saleysan. Taasi waa sababta oo ah THC ama saliida CBD midkoodna biyo ma leh, sidaa darteed waxay u muuqdaan inay sabeeyaan, iyagoo ku daraya qashin cabitaanno leh, uraya cabitaannada. Waa mid ka mid ah sababaha badan ee cabitaanka canna ay ugu culus yihiin dhadhanka daran sida liinta iyo sinjibiil qaarna waxay ku daraan sonkor badan ama casiirka miraha. Waxaa jira rajo ah in horumarrada laga gaaro CBD iyo go'doominnada 'THC', oo ah kuwa ur iyo dhadhan la'aan, waxay ka caawin doonaan cabitaannada inay horumar ballaaran ka sameeyaan waaxda dhadhanka. Shirkad Canadian ah ayaa u maleyneysa inay horey u heshay xalka: waxay qorsheyneysaa inay biir toos uga soo saarto dhirta xashiishka halkii ay ku shubi lahayd sheyga ugu dambeeya.
Waxa kale oo jira rajo ah in biilka Fram ee beeraha ee America ee 2018 - kaas oo sharciyeynaya hemp warshadaha iyo soosaarkeeda, cannabinoids, iyo derivatives - waxay ka caawin doontaa cabitaanka CBD-ga inay helaan soo-gaadhis heer qaran ah si magacyadu u dhisaan wacyiga iyo daacadnimada ka hor inta mamnuucista xashiishadda dhawaan dhamaan. Waa la joojin doonaa.
Khatar ku ah khamriga ama ma'aha?
Dhanka kale, warshadaha khamrigu wali waxay go'aaminayaan in cannabis uu yahay halis ama fursad. Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn, sida Heineken, waxay ku boodeen labada lugood. Badeecadaha Saxiixa, kuwa sameeya khamriga, liinta iyo beershada, oo ay ku jiraan Corona, waxay ku maalgeliyeen $ 4 ee Kobaca Canopy, shirkad cannabis ah. AB InBev, oo ah milkiilaha Budweiser iyo labtar, wuxuu maalgashaday $ 50 million oo wadaag ah oo la leh shirkadda Canna Tilray, kaas oo ku deeqay $ 50 million maalgashi kale oo lagu baaro khamriga aan khamriga la lahayn THC iyo CBD.
Sida CBD loo arko inay tahay dariiq ay shirkadaha xashiishadda u soo bandhigaan wax soo saarkooda dadweyne aad u tiro badan, ayay shirkadahaan cabitaanka khamriga ahi u arkaan xashiishadda inay tahay dariiq ay ku helaan macaamiisha caadiga ah. Da 'yarta khamriga caba waxay dalbadaan astaamaha dhadhanka casriga ah badankooduna guud ahaan way iska ilaaliyaan khamriga, gaar ahaan biirka Cabitaanada xashiishadda ayaa sidoo kale ah dariiq lagu soo jiito macaamiisha cusub ee laga yaabo inay xiiseeyaan, laakiin aan danaynaynin inay sigaar cabaan ama cunaan geedka, ama ay wali ka walaacsan yihiin cuqdada. Cabitaanka xashiishadda waxay bixisaa hab fudud oo caqli badan oo tijaabinta ah.
Lacag badan ayaa la sameyn karaa
Waxaa intaa dheer, waxaa jira lacag badan oo lagu sameeyo cabitaanka canna - maxaa yeelay kuma yimaadaan qiimo jaban. Dhalo 8,5 ounce ah oo Torrey Holistics Berry Lemonade ah oo leh 100 mg oo ah THC la shubay waa $ 25; cashuur ahaan waa in ka badan $ 31 dhalo kasta. Kaliya $ 8 dhalada 12-ounce, Mood33 waxay umuuqataa xatooyo. Laakiin macaamiisha ayaa umuuqda kuwa aad ugu badan inay bixiyaan si loo hubiyo inay kujiraan xawaare sare.
Akhri qodobada buuxa ee Forbes (EN, ilaha)
Jarmal: darawalada ka soo baxa cannabis si toos ah uma khatar galiyaan laysankooda baabuur wadista
Weedada tijaabinta dabaqyada sida VNG
Coronavirus: Xaaladdu way sii xumaanaysaa...
3 faa'iidooyin oo alaabada CBD si kor loogu qaado waxqabadka
Ka dib boqoshaada sixirka cannabis iyo keta caadiga ah sida ...